बोनस पछि राधी विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन
२०७५ असार ५ गते १३:३५
काठमाडौं । मंगलबार राधी विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६१.८२ रुपैयाँ रहेको छ...
नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको असार १३ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज
२०७५ असार ५ गते १२:५८
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको आगामी असार १३ गतेदेखि बुक क्लोज हुने भएको छ । कम्पनीको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दिनदेखि असार २९ गतेसम्म संस्थाको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीले...
बजार झिनो अंकले उकालो, नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
२०७५ असार ४ गते १५:३३
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको बजार सोमबार झिनो अंकले उकालो लागेको छ । कारोबार खुल्नासाथ ओरालोतर्फ लागेको बजार करिब ३ घण्टा पछि उकालो लागेको हो । अन्ततः बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक १.९२ अंकले...
बजार १४ अंकले घट्दा दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी
२०७५ असार ३ गते १५:१८
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । सो दिनको बजार खुलेदेखि दिनभर ओरालो लागेर बजार बन्द हुँदा १२३३ अंकमा झरेको छ । सम्रगमा बजार १४ अंकले घटेको छ । दोहोरो अंकले...
समता माइक्रोफाइनान्सको असार १२ गते बुक क्लोज, हकप्रद सेयर जारी गर्दै
२०७५ असार ३ गते १४:२८
काठमाडौं । समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आगामी असार १२ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । संस्थाको हालै सम्पन्न ६४औँ बैठकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन कम्पनीको कारोबार बन्द गर्ने...
माउन्टेन हाइड्रोले १२ करोड ५० लाखको आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट पायो अनुमति
२०७५ असार ३ गते १४:०८
काठमाडौं । माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति...
वरुण हाइड्रोपावरले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन
२०७५ असार १ गते १४:१५
काठमाडौं । वरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । हकप्रद निष्कासनका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले २५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ...
अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेपछि लगानीकर्ता दोधारमा छन्: डा. रामशरण महत
२०७५ असार १ गते १२:१७
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै पटक पटक अर्थमन्त्री हुनुका साथै सन २०१५ मा विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान समेत प्राप्त गरेका डा. रामशरण महत नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका आर्किटेक्ट तथा...
नेपाल सेवा लघुवित्तको कारोबार खुला, मूल्य रेञ्ज कतिदेखि कतिसम्म ?
काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आज(बिहीबार)बाट सेयर कारोबार गर्न सकिने छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि प्रतिकित्ता १०३.९३ देखि ३११.८१ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकेको छ । नेप्सेले सबै कम्पनीहरुलाई...
बजार झिनो अंकले बढ्दा दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी
२०७५ जेठ ३० गते १४:४७
काठमाडौं । मंगलबार सामान्य अंकले घटेको बजार बुधबार सामान्य अंकले बढेको छ । दिनभर उतारचढाव आएको बुधबारको बजारमा कारोबार बन्द हुँदा परिसूचक २.८१ अंकले बढेर १२४२ अंकमा पुगेको छ । परिसूचकमा वृद्धि भएपनि सेयर...
123 … 196 पछिल्ला »